Xisbiyada Somaliland oo ka jawaabay hadalkii Madaxweyne Farmaajo – Radio Baidoa
By Webmaster	 On Jun 8, 2020
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalinti Sabtidii ka hadlayey furitaanka kalfadhigga baarlamaanka ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadal uu sheegay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi uu ku aqbalay in dib loo billaabo wada-hadalladii.
Ayaga oo ka jawaabaya arrintaas, ayaa xisbiyada mucaaradka Somaliland waxay ku tilmameen hadalkii madaxweyne Farmaajo ku sheegay inuu madaxweynaha Somaliland aqbalay wada-hadalladii labada dhinac mid siyaasadaysan.
Xoghayaha Warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID Yuusuf Keyse ayaa sheegay in hadalka Madaxweyne Farmaajo uu yahay mid siyaasadeysan oo uu ku doonayo in uu markale dib loogu doorto.
Waxaa uu sheegay in waqtigaan la alay xilli kala guur ah oo Soomaaliya la guda geli doono waqti doorasho balse aysan xilligaan habeeneyn inay wada hadlaan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland,hayeeshee awooda wada-hadallada ay leeyihiin Shacabka Soomaaliland.
Xukuumadda Soomaaliya oo ka shirtay Arrimaha doorashooyinka
Puntland oo Boosaaso ka hirgelisay Goob lagu baaro COVID-19